Kudzokorora - Green Renewables | Green Renewables (Peji 2)
Chii chiri marara
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve kuti marara chii, ndezvipi zvakanakira uye hunhu hwauinahwo.
Pfungwa dzekushongedza magirazi emidziyo
Pano tinokuudza kuti ndeapi mazano akanakisa ekushongedza magirazi emidziyo uye kuita kuti imba yako ive nzvimbo yakanaka.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve hunhu uye mashandisiro e thermoplastics. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Zvokuita nemabhuku ekare
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve zvekuita nemabhuku ekare ausingashandise. Dzidza zvakawanda nezve iwo matipi pano.
Nei marara achikosha
Mune ino chinyorwa tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve nei kudzokorodza kwakakosha uye zvikonzero zvacho.
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve radioactive marara uye maitiro ayo. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Mhando dzemidziyo yemarara
Ziva zvakadzama kuti ndeapi marudzi akasiyana emidziyo yemarara aripo. Isu tinokudzidzisa iwe zvese nezvazvo pano.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve zvipuka zvinogadzirwa nemapurasitiki nezvakanaka zvawo. Dzidza zvakawanda nezve izvi zvigadzirwa.
Iko kunokandwa masiki
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuti masiki anokandwa kupi uye kwavanoenda. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Kumba mhepo yekugadzirisa
Mune ino chinyorwa tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive yako yekumba mhepo yekugadzirisa nhanho nhanho.
Isu tinokuudza iwe kuti chii chakakosha kukonzeresa magaba nekuaisa mumudziyo weyero. Dzidza nayo pano.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve zvishandiswezve zvinhu uye mashandisiro azvinoita. Dzidza zvakawanda nezve maitiro avo pano.
Mapepa anogadzirwa sei
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuti mapepa anogadzirwa sei uye ndezvipi mbishi zvinoshandiswa kwairi.
Ndeipi pfungwa yakachena
Isu tinokuudza iwe kukosha kwepfungwa yakachena yekutarisira marara emumaguta. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Maitiro ekudzokorora kumba
Isu tinokuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve maitiro ekudzokorora kumba. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Zvishongo zvekare zveKisimusi
Isu tinokuratidza yakanakisa mazano uye matipi ezve zvakadzokororwa zveKisimusi kushongedza. Dzidza kupa yako yekufungidzira uye yekudzokorora.
Musiyano uripo pakati pegirazi nekristaro
Isu tinokuudza musiyano wese pakati pegirazi nekristaro, hunhu hwavo uye mashandisiro echinhu chimwe nechimwe. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Muchikamu chino tinokuratidza maitiro ekugadzira sipo yekumba kumba yekudzokorodza mafuta akamboshandiswa. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve ecopark uye mabhenefiti avo. Dzidza zvakawanda nezve iyi marara manejimendi modhi.
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvePET mapurasitiki uye maitiro avo. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Muchikamu chino tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve vermiculture, hunhu uye biology yehonye.
Muchikamu chino unogona kuwana kupatsanurwa kwemarudzi akasiyana epurasitiki. Dzidza nezve kubatsira kwayo uye kuumbwa pano.
Muchinyorwa chino tinotsanangura izvo chirongwa cheiyo Ocean Cleanup chinosanganisira kuchenesa mapurasitiki kubva mumakungwa. Dzidza zvakawanda nezvazvo pano.
Kudzokorodza mapepa epurasitiki
Kudzokorodza mapurasitiki macaps ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dzaungaite zvese kubatana uye nharaunda. Pinda pano uye uone kuti sei.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve compost bin
Muchikamu chino tinotsanangura zvese zvaunoda kuti uzive nezve compost bin. Ziva zvese maficha nezvakanaka zvainazvo.
Muchikamu chino tinotsanangura kuti zero zero chii, zvazvinovavarira kuita uye maitiro ekuzviita. Pinda pano kuti uzvizive zvakadzama.
Muchikamu chino tinokuratidza kuti kupora kwemarara chii uye kuti kunoitwa sei. Dzidza nezve marara manejimendi pano.
Dzidza kuisazve midziyo
Muchikamu chino tinokuratidza dzimwe pfungwa dzepakutanga kuti udzidze kugadzira midziyo yekare kumba. Usapotsa!
Muchikamu chino tinokuratidza dambudziko rekushandisa mapepa pasirese uye tinokudzidzisa nhanho nhanho maitiro ekudzokorora mapepa kumba.
Muchikamu chino tinokuratidza kuti makadhibhodhi fanicha chii uye nehunhu hwayo. Iwe unogona kudzidza nezve inoenderera kushongedzwa.
Dzidza zvese zvaunoda kuti uzive nezve kukosha kweye green green. Pinda pano kuti udzidze zvakawanda pamusoro pechiratidzo chekudzokorora.
Muchikamu chino tinokudzidzisa iwe chaiwo epakutanga maitiro ekudzokorora mbatya kumba uye nekuvapa mashandisiro matsva. Usapotsa!
Tsvina dzakasimba ndidzo dzinogadzirwa zuva nezuva kutenderera pasirese. Mune ino posvo tinotsanangudza kwavo kupatsanurwa uye nemabatirwo avanoitwa.
Muchikamu chino tinotsanangura zvakadzama maitiro ekudzokorora mapurasitiki nenzira kwayo. Pinda pano kuti upindure mibvunzo yako.
Hauna chokwadi chekuti marara akaiswa mumudziyo we grey? Muchikamu chino tinokutsanangurira iwe zvakadzama. Pindai mudzidze nezvazvo.
Upcycling inzira yekushandisazve patinopa chinhu chakakura kune tsvina kupfuura zvayaive pakutanga. Pano tinotsanangura zvese zvakadzama
Muchikamu chino iwe unozogona kugadzirisa kusahadzika kwese nezve iyo brown brown mudziyo. Iwe unozodzidza izvo zvaunofanira kukanda pairi uye izvo zvinoshandiswa nazvo.
Mune ino posvo isu tinokudzidzisa iwe mune yakadzama nzira iyo yakakosha maficha eiyo 3r. Nenzira iyi tinotsanangudza maitiro ekuderedza, kushandisa zvekare uye kudzokorora.
Isu tinotsanangura mhando dzemarara dzekuisa mumudziyo weyero. Pinda kuti uzive zvakajairika zvikanganiso uye zvimwe zvinoda kuziva.
Zvinhu zvipi zvinogona kudzokororwa
Isu tinotsanangura zvakadzama kuti zvinhu zvipi zvingadzokororwazve uye chii chakakosha kuita marara. Pinda uye dzidza zvakawanda nezvazvo.
Kudzokorora kwemabhodhoro egirazi
Girazi bhodhoro marara marongero ezuva. Muchikamu chino iwe uchakwanisa kuziva kuti ndeipi marara maitiro uye kusahadzika kunovapo.
Dzokororazve mabhodhoro epurasitiki
Mune ino posvo iwe unogona kudzidza akati wandei mazano ekuti ungadzore sei mabhodhoro epurasitiki uye uvape wechipiri mukana. Iwe unoda kuziva zvakawanda?
Chii chinonzi biodegradable chigadzirwa
Chigadzirwa chinogadzirwa nemupfudze ndechimwe chinogona kuzvidzikisira choga mumasikirwo. Dzidza pano zvese zvaunoda kuti uzive nezvazvo.
Mune ino posvo iwe unozogona kuziva ese marudzi emhando yekugadzirisazve zviratidzo zviripo uye zvinoreva zveumwe neumwe wavo. Iwe unoda kuvaziva here?
Kudzokorodza bepa nemakadhibhokisi kwakawedzera muna2017
Iyi posvo inoratidza iyo data pamusoro pekuwedzera kwepepa uye makadhibhokisi ekudzokorora muSpain muna 2017 uye zvinotarisirwa. Iwe unoda kuziva zvakawanda?
Kofi capsules inofanirwa kudzokororwa mumidziyo yakati
Kofi capsules mhando yemarara inofanirwa kuunganidzwa mune imwe mhando yemudziyo. Iwe unoda kuziva here kuti anoshandiswazve sei?
Kudzokorora mabhini, mavara uye zvinoreva
Zvinoreva zvemavara emidziyo yekudzosera marara uye nemabatiro atinofanira kuishandisa kuita kupatsanurwa kwemarara.
Kudzokorora kuri kuita nyore
Tinogona kuita nemasaini akareruka uye akareruka ekuti zvishandiswezve uye, tisingazvizive, tinenge tiri kubatsira nyika yedu. Iwe unoda kuziva kuti zvii zviito zvemuviri?
Nei uchifanira kudzokorodza mafuta akamboshandiswa?
Litre rimwe chete remafuta akashandiswa anokwanisa kusvibisa anoda kusvika chiuru litita emvura yekunwa. Naizvozvo, zvakakosha kudzokorodza mafuta akamboshandiswa.
Nharaunda dzakazvimiririra dzinodzokorora zvakanyanya muSpain
Nharaunda dzakazvimiririra dzakashandisazve zvakanyanya mu2014 dzaive Andalusia, ichiteverwa neCatalonia uye Nharaunda yeMadrid.
Dzokororazve a la Madrileña, mushandirapamwe mutsva wekugadzirisa zvakare muMadrid
Madhorobha eGuta reMadrid neEcovidrio vatangisa mushandirapamwe mutsva wekudzokororazve magirazi uye kuita kuti vanhu vazive kukosha kwayo.
Nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dzinoramba kuvakwa kweanopisa maviri matsva muMadrid
MuMadrid, kuvakwa kwenzvimbo mbiri dzinopisa marasha kurapa tsvina kwakarongwa. Mapoka akati wandei ezvemamiriro ekunze akaramba.
Bvisa mvura uchishandisa graphene nanorobots
Inotungamirwa nemagineti, tudiki graphene machubhu aigona kuchengeta simbi dzakanyungudutswa dzakasviba mumvura yakasviba. Pakati…
Kurambidzwa kushandisa mapurasitiki kunonoka kusvika June 1
Yakatanga kurongerwa Ndira 1. Yakazoendeswa kuna Kurume 28. Ichazopedzisira yabva ...
PaperLab, muchina wekudzokorodza bepa hofisi
Epson yave kuda kushambadzira muchina kuti ishandise zvakare bepa rakagadzirirwa makambani. Iyo PaperLab inokwanisa kugadzira akasiyana mapepa mafomu uye kunyangwe pefiyumu bepa.
Marara epurasitiki eMediterranean akashandurwazve muhembe
Mabhoti mazana maviri eSpanish ekuredza akatanga kuunganidza marara epurasitiki muMediterranean Sea. Fekitori yeMadrid ichaita kudzokorodza marara aya kugadzira jira rechiratidzo chekupfeka.
Kusvibiswa kwemweya kuchinjika kuita inki yeprinta
Mumwe muongorori achangobva kugadzira kugona kwekuchenesa uye kusefa kwehunyanzvi, nekutenda kwaanokwanisa kutora sosi yekabhoni kubva pakusvibisa kwemhepo nekuishandura kuita inki yeprinta.
Kugadzirwa kwenyika kwepurasitiki
Kugadzirwa kwepasipo kwepurasitiki kunowedzera gore rega rega (mazana emamiriyoni mazana masere nemasere emamiriyoni, ndiko kuti, anopfuura 288% muna2,9), zvakanangana nekukura kwevagari, uye zvichidaro, nekuwedzera kwehuwandu hwemarara.
Kudzokorodza bepa nemakadhibhokisi marara
Mapepa nemakadhibhokisi akagadzirwa nematanda, iwo akawandisa huwandu hwepepa nemakadhibhokisi anodyiwa, uye nekuwedzera kuparadzwa kwemasango. Iko kunakidzwa kwepepa uye kadhibhodhi ndeyekuti inogona kudzoreredzwa uye kugadziriswazve kugadzira mamwe mapepa uye makadhibhokisi.
Chii chinonzi grey simba
Simba reGrey rinowanzo kutaurwa nezvaro kuratidza kukanganisa kwechigadzirwa.
Solvatten, iro zuva rinonwa mvura
Solvatten inzira inobatsira yekurapa mvura yakagadzirirwa kunatsa mvura uye kuita kuti inwe.
Hupenyu hupenyu hwemarara mune zvakasikwa
Kurasa marara mune zvakasikwa kune mhedzisiro mizhinji yatisingazive kuyera zvachose ... uye ndezvekuti zvinogara kwenguva refu kupfuura zvatinofunga kusvika vaparadzwa.
Ita kuti mvura isasvibiswe
Kunyange chiri chokwadi kuti maindasitiri kana varimi vanowanzopomerwa mhosva yekusvibisa mvura, vashandisi vega vane yavo mugove webasa.
Zvigadzirwa zve ecological zvichibva pane aluminium openers
Zvigadzirwa zvemuchadenga zvinoenderana nesoda zvinogona kuvhura
Zvikwama uye zvishongedzo zvakagadzirwa kubva kune zvekare marata
Pari zvino pane makambani mazhinji uye mabhureki ayo anodzokorora matai kugadzira mabhegi uye zvimwe zvigadzirwa
Nyowani nyowani yemagetsi marara marara chirimwa muMerida
Pakupera kwegore, kuvakwa kweyezve marara mariza muMerida kuchapedzwa
Zvakanakira kudzokororazve mafuta
Patinodira mafuta ekubikisa kana mafuta emota pasi pesinki, tiri kukonzera mhirizhonga mumakungwa nemumakungwa sezvo ichigadzira firimu isina mvura inovhara kufamba kwezuva uye kuchinjaniswa kwe oxygen kubva kuhupenyu hwemumvura.
Dzokorora manapukeni uye gadzira biogas
Iyo purojekiti yekudzokorodza vana manapukeni uye kugadzira biogas
Mapurasitiki epurasitiki anotendera kugadzirwa kwe biodiesel
Mapurasitiki epurasitiki anoita kuti zvikwanise kugadzira mafuta
Zvigadzirwa zvinogadziriswa zvigadzirwa zvinogona zvakare kusvibisa
NH mahotera anozvipira kudzokorodza
NH yakazvipira kudzokorodza panzvimbo dzayo
Chii chatinogona kutora kuenda kunzvimbo dzakachena
Iwo Akachena Points inzvimbo dzakagoverwa mumaguta ese eSpain kwaunogona kutora marara asingafanire kusiiwa mumidziyo nekuti ine njodzi kune nharaunda.
Nzira yekushandisa sei mvura yemvura
Mvura yemvura inogona kubatsira pamashandisirwo akasiyana pamba, unogona kuitora uye kuishandisa kuti udzikise kunwa kwemvura yekunwa kumba, kubatsira nharaunda.
Vapepeti vane hushamwari
Kudhinda pabepa kuri kuramba kuchinetsa nharaunda. Pamusoro pemishandirapamwe yekuchengetedza, makambani ari kuyedza kugadzira matekinoroji anovabvumidza kushandisa mapepa mashoma neingi.
Zvishongo zveCanada zvinogadzira mabhendi emuchato ane eco-inoshamwaridzika madhaimani
Kambani yeCanada Brilliant Earth inogadzira mabhendi emuchato uye maringi ekubatana ane eco-hushamwari madhaimani, goridhe uye platinamu.
Seaweed kugadzira plastiki
Algaeventure Systems (AVS), ndeimwe yeakawanda